Singapaoreana Miatrika Famotoran’ny Polisy Rehefa Avy Nanatrika Fiaretan-tory Ho An’ilay Mpiasa Mpifindra Monina Notapahan-doha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2017 5:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 简体中文, 繁體中文, 한국어, 日本語, Italiano, English
Mpitandro ny filaminana tonga nandritra ny fiaretan-tory tamin'ny 13 Jolay tao ivelan'ny fonjan'ny Tranobe Changi. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'i Kirsten Han, nahazoana alalana.
Nampiantso olona 17 ny polisin'i Singapaoro noho ny fandraisana anjara tamin'ny fiareta-tory mandrehitra labozia natao ny 13 Jolay 2017, miampanga ny vondrona mpikatroka sy mpanao gazety ho nikarakara ‘fivoriana tsy ara-dalàna’.
Nivorivory teo ivelan'ny fonjan'i Changi ao atsinanan'i Singapaoro ny vondrona mba haneho fanohanana ho an'ny fianakavian'ilay Maleziana mpiasa mpifindra monina Prabagaran Srivijayan, izay novonoina ho faty noho ny fiampangana azy tamin'ny trafikan-drongony tamin'ny 14 Jolay.
Nanitrikitrika ny maha tsy manan-tsiny azy i Prabagaran mandra-pahatapitry ny androm-piainany, ary vondrona mpiaro zon'olombelona maromaro no nandrisika ny governemanta Singapaoreana mba hanafaka an'i Prabagaran sy hamerina hijery ny raharaha momba azy. Saingy notanterahana ny didy famonoana azy azy ho faty, ary lasa olona fahefatra novonoin'i Singapaoro tamin'ny taona 2017 i Prabagaran noho ny fiampangana mifandraika amin'ny zava-mahadomelina.
Na dia maro tamin'ireo olona 17 nanatrika ny fiaretan-tory aza no mpiaro ny fanoherana ny sazy ho faty, dia naneho firaisankina indrindra tamin'ny fianakavian'i Prabagaran no nataon'izy ireo.
Nandritra ny fiaretan-tory, nisy polisy maromaro tonga sy naka an-keriny ireo labozia ary navelany hitohy ny fiaretan-tory rehefa tsy nirehitra ny labozia.
Roa volana taty aoriana, manadihady ireo olona nanatevin-daharana ny fiaretan-tory ny polisy Singapaoreana noho ny fandikàna ny lalàna mikasika ny fivoriam-bahoaka. Voaràra tanteraka ao Singapaoro ny manao fivoriana tsy misy fahazoan-dàlana araka ny fizarana 16 (2) (a) ao amin'ny Lalàna momba ny Filaminam-bahoaka, Toko faha-257A.
Namariparitra tao amin'ny Facebook mikasika ny zava-niainany ilay mpanoratra Kirsten Han, mpiara-miasa amin'ny Global Voices izay nanatrika ny fiaretan-tory ary avy eo nahazo fiantsoan'ny polisy, nanontany tena izy hoe nahoana ilay fiaretan-tory no heverina fa fivoriana tsy ara-dalàna:
Takatro fa adidin'ny mpitandro filaminana ny miaro ny lalàna sy ny filaminana ary manaja ny lalàn'ny firenentsika. Saingy raha heverina fa fivoriana tsy ara-dalàna mendrika ataon'ny polisy famotorana ny fiaretan-tory tsotra tsy misy herisetra sy mangina ho an'ny lehilahy homelohin'ny fanjakana ho faty, angamba fotoana izao hieritreretana raha mahita fifandanjana tsara eo amin'ny filaminam-bahoaka, fahalalahana mivorivory sy ny fangorahana isika.
Nampiantso an'i Terry Xu, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny ny tranokalam-baovao The Online Citizen ihany koa ny polisy, naneho ny fahagagany i Terry raha nahita fa noraisin'ny polisy ho fihetsiketsehana tsy ara-dalàna ny fiaretan-tory:
“Fivoriam-bahoaka tsy ara-dalàna” mba hitarainana ho an'ny olona iray novonoina ho faty teo ambany ny lalàn'ny fanjakana, sy nanizingizina fa tsy manan-tsiny izy mandra-panapahana ny lohany. “Fivoriam-bahoaka tsy ara-dalàna” ihany koa izany izay nipoitra tao ireo mpitandro filaminana ary nilaza fa tsy misy olana ny mivorivory rehefa tsy misy labozia napetraka.
Toa sakanan'ny polisy tsy hiala ny firenena ireo izay nanatrika ny fiaran-tory kanefa tsy misy ny didy momba izany avy amin'ny manampahefana. Nosakanan'ireo manampahefana misahana ny fifindra-monina i Terry Xu raha nanomana handeha ivelan'i Singapaoro:
Miasa ho mpitsara ve ny polisy hanapahan-kevitra raha afaka mandao ny firenena ny olona iray na tsia, tsy mitondra ny raharaha akory eny amin'ny fitsarana?
Raha tsy fanorisorenana izany, tsy fantatro izay zavatra hafa azo heverina ho toy izany.
Nitsikera ny polisy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona noho ny fanorisorenana ireo olona nandray anjara tamin'ny fiaretan-tory milamina. Function 8, ONG iray ao Singapaoro, namoaka fanambarana manasokajy ny tranga ho “manohitra ny toe-tsain'ny Lalàm-panorenantsika sy fandaniam-poana ny fitaovan'ny polisy.”